အပတ်စဉ်ကဏ္ဍများ, 05 ဒီဇင်ဘာ 2018
5 ဒီဇင်ဘာ 2018 ဗုဒ္ဓဟူး
ဆီးချို နောက်ဆက်တွဲ နှလုံးရောဂါ [အပိုင်း တစ်]
ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၈ - ဆီးချိုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နှလုံးရောဂါ ဘယ်လို ဖြစ်စေပြီး၊ ဘယ်လို လူတွေမှာ အဖြစ်များကာ၊ ဘယ်လို လက္ခဏာတွေပြပြီး၊ ဘယ်လို စပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါလဲ။
ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Bob Dole
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ကို နှုတ်ဆက်အလေးပြုဖို့ အမေရိကန်လွှတ်တော် လူအများစုခေါင်းဆောင်ဟောင်း Bob Dole ဟာ လွှတ်တော်က အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့အတူ ဘေးကအကူအညီနဲ့ အလေးပြုခဲ့ရတဲ့ ၉၅ အရွယ် Dole ဟာ Bush လိုပဲ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ စစ်ပြန်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Lying in State / Lie in State ဆိုတာ ဘာလဲ
George H. W. Bush ရဲ့ ဈာပနအတွက် ပြင်ဆင်
ကွယ်လွန်သူ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George H. W. Bush ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်က အမျိုးသားဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့မှာ ကျင်းပပြီး ရုပ်အလောင်းကို သဂြို င်္လ်ဖို့ Texas ပြည်နယ်ပြန်လည်သယ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Zlatika Hoke သတင်းပေးပို့ထားတာကို ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းကပြောပြပေးမှာပါ။
ဂျပန်သံအမတ်ကြီးရဲ့ ရခိုင်အရေး သဘောထား
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖိအားပေး ဒဏ်ခတ် အရေးယူ တဲ့နည်းနဲ့ ပြေလည်မယ်လို့ မယူဆတာကြောင့် အဲဒီလို အရေးယူတာတွေကို သဘောမတူဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး Mr.Ichiro Maruyama က ပြောပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက သီးခြား တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
Cox’s Bazar ဒုက္ခသည်စခန်း အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး သွားရောက်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှာ ထွက်ပြေး ခိုလှုံနေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ဘေးကင်း လုံခြုံပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ မိမိသဘောနဲ့ ပြန်ကြတာကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ လိုလားကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Earl R. Miller က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးပါမယ်။
သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ရဲ့ ဈာပနမှာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသေးတဲ့ သမ္မတနဲ့ သမ္မတဟောင်း ၅ ယောက် တက်ရောက် နှုတ်ဆက်ဂုဏ်ပြု၊ ရိုဟင်ဂျာအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုတွေဟာ genocideလူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုမြောက်ကြောင်း အတိအလင်း သတ်မှတဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Pompeo ကို အမေရိကန်အမတ်တွေ ထပ်ဖိအားပေး စသည်
ဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့် အညီအမျှရရဲ့လား (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိမိယုံကြည်ရာ ဘာသာ သာသနာကို လွတ်လပ်စွာ ယူဆ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း၁ အပိုဒ်၃၄ မှာ ပြဌာန်းပေးထားပါတယ်။